Wet Ma kpọrọ nkụ agụụ Cleaner, Air ikuku mmiri - Jinqiu
Ngwaahịa anyị nabatara nke ọma maka ndị ahịa anyị maka ogo dị elu, ọnụ ahịa asọmpi yana ụdị ndị kachasị mma.
Shijiazhuang Jinqiu Trading Co., Ltd. bụ ọkachamara soplaya nke ihicha igwe, ihicha ngwá ọrụ na nkume mmezi usoro. Anyị nwere ike ịnye scrubber, burnisher, agụụ Cleaner, kapet Cleaner, ikuku mmiri, wringer Trolley, adọkpụ, mabul na konkiri elekọta, polishing, idozi na ihicha ngwaahịa.
Ọtụtụ ndị ahịa na-atụ aro sistemụ nhicha ọhụrụ maka ahịa mpaghara na mba dị iche iche, maka ndị ahịa dị iche iche anyị nwere ike ịnye usoro ihe ngwọta dị ka achọrọ. Ruo ugbu a, anyị na-ebupụ igwe nhicha na ngwaọrụ nhicha na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Europe karịa 10years.
Shijiazhuang Jinqiu trading ga-aga n'ihu na-enye ndị mmekọ anyị na nkà na ụzụ dị elu ma na-emeju ngwaahịa, iji mee ka ndụ anyị na ịrụ ọrụ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma.
Obi siri anyị ike na anyị ga-ekerịta nsonaazụ ibe anyị ma wulite mmekọrịta mmekọrịta siri ike na ndị anyị na ha ga-aga ahịa a.
Osisi na-acha uhie uhie na nkume nchara bụchacha granite nke usoro lamellar. Na mgbakwunye na nsị mmiri na-achakarị nke granite, n'ihi agba ọcha na-acha ọcha, a ga-enwe ntụpọ mmiri ma ọ bụ mmetọ, na nchọta mmiri adịghị mfe ịpụ. Na a ...
Kedu ihe kpatara ịhọrọ igwe nhicha
Dika ala ulo ahia na ugboala bu ndi marble ma obu seramiiki, udiri ala ndi di otua nwere ihe di elu choro maka idi ocha, ka emechara, ha na-anochite onyogho nke ebe ohaneze. Ya mere, a ga-eji nlezianya rụọ ọrụ nhicha ahụ. Nke nta nke nta, ...
National Chemical Laboratories dị ka anyị si mara NCL, site na mmalite mbido na ngwụsị afọ 1940 na-eme ncha na ncha ntutu maka azụmaahịa ezinaụlọ mara mma, na ọrụ ndị isi taa na ụlọ ọrụ mmezi ịdị ọcha dị ka akara zuru oke, zuru ụwa ọnụ na-eweta ọrụ. NCL bu ya ...
Ejiri nlezianya mee ngwaahịa ọ bụla, ọ ga-eme ka afọ ju gị.